के कांग्रेस नेतृत्वको मौनता गलत थियो ?
३ फाल्गुन २०७७, सोमबार १८:४८
करिब दुई तिहाईको नजिक मत पाएको नेकपाले सरकार सञ्‍चालन गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । शासन सत्ता सञ्‍चालन गरेको तीन वर्षमा नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको हामीले अच्चम्मै विकास गर्‍यौं भन्ने भाषण सुन्‍नुबाहेक अरु कुनै नयाँ कुरा पाएनन् । राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित भएका नेपाली जनता कम्युनिष्टको चिल्ला र खोक्रा भाषणमाथि विश्वास गर्दै स्थिरता र समृद्धिका लागि मत दिए तर त्यसको बदलमा नेताहरुको चटक देख्नु सिवाय अरु केही देखिएन । यसले लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिबाट आजित जनता थप निरास भए ।
यसबीचमा कम्युनिस्ट सरकारले संविधान संस्कृतीको खिल्ली मात्र उडाएनन्, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन उद्दत् भइरहे । नेकपाको यो ती बर्षे सरकार भष्टाचारको मामिलामा पनि एक नम्बर नै रह्यो । माहामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार भएको व्यापक गुनासोलाई छानबिन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले कुनै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै बचाउमा लाग्दा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाए ।
आफ्नै विश्वासिला मन्त्रीको ७० करोड भ्रष्टाचारको टेप रेकर्ड सार्वजनिक हुँदा उल्टो सूचकलाई धम्क्याउने प्रशस्त प्रयास गरिए । जनताको अमनचयन र शान्ती सुरक्षा राज्यको प्रथम जिम्मेवारी भए पनि सयौं बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि राज्य धैरै घटनामा निरिह मात्र भएन गृहमन्त्रीले पुँजीवादी व्यवस्थाले बलात्कार बढाएको हो भन्‍ने लज्जास्पद तर्क गरे । निर्मला बलात्कारको घटनामा उच्चपदस्थको संलग्‍नताको आरोप लाग्दा हालसम्म दोषी पत्ता नलाग्‍नुले आरोपलाई बल पुर्‍याइरहेको छ । यसैबीच बैतडीकी भागरथी भट्टको घटना सार्वजनिक भएको धेरै दिन बित्दा पनि अपराधी सार्वजनिक हुन नसक्नुले राज्य प्रशासनको असक्षमता उजागर भएको छ ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लेखेर आफ्नो फोटो राजधानीको पोल पोलमा झुण्ड्याएर शासनको बागडोर समालेका प्रधानमन्त्रीले साँच्चै बोल्नुबाहेक केही गर्न सकेनन् । विकासका चर्का नारा लिएर भोट मागेका कम्युनिस्टले मुलुक निर्माणको ऐतिहासिक अवसर गुमाएको आरोप लागिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई मौनता साधेर प्रतिपक्षको भूमिका ननिभाएको गम्भीर आरोप समेत लाग्यो ।
यस आरोपका सम्बन्धमा, के साँच्चै नेपाली कांग्रेसले गल्ती गरेकै हो त ? यो प्रश्नको उत्तर त्यती सजिलो भने छैन । नेपालमा कम्युनिस्टहरु प्रजातन्त्रवादीहरुलाई कमजोर बनाउन दरबारले जन्माएको गम्भीर आरोप लाग्‍ने गरिन्छ । केही अपवाद छोडेर कम्युनिस्ट नेताको चरित्र र जीवनशैली हेर्दा त्यो कुरामा बल पनि मिल्दछ । जहिले पनि सस्तो लोकप्रियताको राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट चरित्र यसपाली उदांगो भएको छ । समृद्धी र स्थायीत्वको नारा लिएर विकासका सपना ‘बाढी’ मत लिएका कम्युनिस्टहरुले यो तीन वर्षमा ऐतिहासिक भ्रष्टाचार गर्नु र आपसी कलहमा बिताए र झगडा पार्टी विभाजन सम्म पुग्यो ।
यदि यो अवस्थामा साच्चै कांग्रेस बोलेको भए उनीहरु अझै कांग्रेसले काम गर्न नदिएको झुटो तर्कसहित जनतालाई गुमराहमा राख्थे । यसर्थ कांग्रेसले मौन बसेर नै कम्युनिस्टको वास्तविक अनुहार जनताले हेर्ने मौका पाए । हो लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई वेटिङ् गभरमेन्टका रुपमा लिइन्छ । उसले जहिले पनि रचनात्म विरोध गर्ने, विकल्प दिनेलगायत उसको जिम्मेवारी भित्र पर्नुपर्थ्यो त्यो कुरामा केही हदसम्म कांग्रेु चुक्यो । तर, कांग्रेस नेपाली जनता सामु कम्युनिस्टको वास्तविकता ल्याउन सफल भएको छ, जुन जरुरी पनि थियो । यदि यसो हुँदैन थियो भने अर्को चुनावमा समेत कांग्रेसले काम गर्न नदिएका नारा छताछुल्ल हुन्थे ।
यी सबै भैइरहँदा अब भने कांग्रेसले मौनता तोडनु पर्दछ । संविधान संस्कृती निर्माण हेतु तथा वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि कांग्रेस नेतृत्वले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु जरुरी भएको छ ।
ओलीको संसद विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै सबैभन्दा ठूलो अदालत सार्वभौम जनता भएकाले आफू चुनावका लागि पनि तयार भएको सन्देश दिएर कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहँदै गर्दा चुनाव पनि नगर्ने संसद पनि पुनर्स्थापना नहुने अवस्थाका लागि पनि कांग्रेस तयार भएर पुन: हरेक गतिरोधको अन्त्य गरे जस्तै कम्युनिस्ट अकर्मण्यताबाट पनि मुलुकलाई पार लाउने तयारी गर्ने हो की ?